Maamulka gobolka Banaadir oo soo saaray amar wadno-qabad ku ah musharixiinta doorashada (DHAGEYSO) - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maamulka gobolka Banaadir oo soo saaray amar wadno-qabad ku ah musharixiinta doorashada (DHAGEYSO)
Amar maanta kasoo baxay maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu mamnuucay in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya aan lagu qaban karin banaanbaxyo uusan maamulka ogolaan.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir C/fitaax Cumar Xalane ayaa sheegay in amar kasoo baxay maamulka gobolka Banaadir lagu mamnuucay in magaalada Muqdisho aan laga dhigi karin bannaanbaxyo uusan ka war-qabin maamulka.
Wuxuu sidoo kale afhayeenku sheegay in degmooyinka gobolka Banaadir uu ka taliyo maamul, islamarkaana aan ogoleyn in dad-weyne lasoo bannaan-bixiyo, iyadoo aan wax fasax ah laga heysan maamulka gobolka.
Dhinaca kale, C/fitaax Xalane ayaa sheegay in maalmaha soo socdo magaalada Muqdisho laga dhigi doono banaanbax aad u xoogan ee looga soo horjeedo arrinta ku saabsan badda Soomaaliya oo ay dowladda Kenya ku dooneyso inay si xoog ah ku qaadato.
Si kastaba ha ahaatee, amarkaan kasoo baxay maamulka gobolka Banaadir ayaa yimid kadib markii uu maamulku ka war-helay in xisbiyadda mucaaradka ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa musharixiinta doorashada ay wadaan qorshe ay ku doonayaan inay banaanbaxyo ka dhigaan degmooyinka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.